I-Morph On TikTok: Isihlungi Esisha Ku-TikTok | XperimentalHamid
I-Morph On TikTok: Isihlungi esisha ku-TikTok
Kwangathi 4, 2021 by USasha Gohar
Umkhuba kuTikTok uyamangalisa kangangokuba uzokuphefumula. Kubizwa ngokuthi yi-Morph kuTikTok.
I-TikTok ukuphela kohlelo lokusebenza olunamandla okubandakanya abantu kungxenyekazi yalo isikhathi eside. Isinikeza ngezinketho ezibanzi zamavidiyo amafushane. Uke waqaphela ukuthi uvame ukuskrolela bese upheqa ngaphandle kokuphela noma nini lapho uvula lolu hlelo lokusebenza?
Lokhu yikho okwenza iTikTok ingeze okumangazayo kuzinhlelo zokusebenza zemidiya yomphakathi esivele zithanda i-Instagram ne-Snapchat.
Nokubonga on TikTok:
Yini i-Morph on TikTok?
Ungayenza kanjani i-Morph on TikTok?
Uma ufuna ukwazi ngalolu hlelo lokusebenza, ufike endaweni efanele.
Kulokhu okuthunyelwe, ngizokutshela ukuthi lesi sihlungi simayelana nani. Ngizobuye ngichaze izindlela eziningi lesi sihlungi esishintshe ngazo okuqukethwe okulayishwe kuhlelo lokusebenza. Ekugcineni, ngizoba ne-akhawunti enemininingwane yokuthi ungasisebenzisa kanjani lesi sihlungi.
Lapho usuqonde konke okufanele ukwazi ukusebenzisa lesi sihlungi kumavidiyo akho. Ngakho-ke ake siqale ngaphandle kokuqhubeka.
Eminyakeni edlule sibonile ukuhlunga kuguquka. Ekuqaleni, izihlungi zazingelutho ngaphandle kwendlela yokuthuthukisa ikhwalithi yezithombe namavidiyo ngokushintsha imibala nokuphambana kwezithombe.
Kepha namhlanje, izihlungi zingenza okungaphezu nje kokuthukuthela ngemibala nokuqhathanisa ukuthuthukisa ikhwalithi yezithombe namavidiyo.
Abantu njengamanje babona izihlungi eziningi ezintsha ezimangazayo kangangokuba abantu bazisebenzisa ziphindelela.
Uma sikhuluma ngokuhlunga izinhlelo zokusebenza ezithile zokuxhumana nabantu zifika engqondweni, okungukuthi, iTikTok ne-Snapchat.
I-Snapchat inakho konke ukuhlunga okumangazayo kepha iTikTok nayo ibamba ngokushesha okukhulu. Singalinganisa indima yeTikTok yokwethula izihlungi ezintsha ngokubheka isihlungi seMorph.
Kuyisihlungi esizokushiya umangele. Ishintsha isuke ebusweni bomuntu iye komunye ngendlela emangazayo. Uma usuyisebenzisile kuvidiyo yakho ku-TikTok, kunzima ukusho ukuthi kwenziwa ngumuntu ojwayelekile impela.
Yile ndlela ukuhlunga okuguquke ngayo esikhathini esedlule: kunika abantu amandla okwenza kahle ekuhleleni amavidiyo abo. UMorph kuTikTok uyisibonelo esisodwa.
Uma ungumsebenzisi we-TikTok osebenzayo, vele wazi ukuthi ungayisebenzisa kanjani imiphumela nokuhlunga kumavidiyo akho. Kumele wazi futhi ukuthi eminye imiphumela kunzima ukuyisebenzisa kuneminye.
Abantu banenkinga ethile ngokusebenzisa i-Morph kuTikTok. Kade befuna impendulo futhi ngizimisele ukufakazela eyodwa. Ngakho-ke, isebenza kanjani i-TikTok ye-Morph?
Ukufaka isihlungi se-morph kumavidiyo akho ku-TikTok kufanele uye kuhlelo lokusebenza lwe-TikTok. Lapho usuvule uhlelo lokusebenza, uzodinga ukuthepha kusibonakaliso se - '+' ngaphansi kwesikrini.
Uma usulapho, uzobona izinketho ezintathu ezansi kwesikrini sakho, okungukuthi, ama-60s, 15s, kanye nezifanekiso ze-Photo.
Thepha kumathempulethi ezithombe bese uqhubeka nokupheqa uze uhlangabezane nesihlungi se-morph. Uma usuyitholile, kuba lula ukuyisebenzisa kunoma iyiphi ividiyo noma iqoqo lezithombe ozifunayo.
Lapha ungafunda esinye isihloko Ukuhlinzwa Komhlathi TikTok
Isihlungi seMorph kuTikTok sizakhela igama kuTikTok. Akugcini lapho, abantu bebelokhu besebenzisa amavidiyo analo mphumela nakwezinye izingosi zokuxhumana nabantu.
Kulokhu okuthunyelwe, ngikutshele ngomphumela we-Morph. Ngikutshele nokuthi ungasithola kanjani isihlungi se-Face morph kuTikTok.
Manje njengoba usufunde lokhu okuthunyelwe, ngithemba ukuthi uzokwazi ukusebenzisa lesi sihlungi kalula.
Izigaba I-Tiktok Amathegi Ungayithola Kanjani On TikTok, Uyini umhlobo on TikTok Imeyili kwemikhumbi
Nelisiwe Sibiya TikTok: Latest Trend On TikTok
I-Flash On TikTok: Ungayisebenzisa Kanjani I-Flash Front Ku-TikTok